Nhau - Makomborero ePVC Pipes
Pombi dzePVC dzinotora pombi dzePVC-U dzemadhiraini, ayo akagadzirwa ne polyvinyl chloride resin seyakanyanya mbishi zvinhu Izvo zvinowedzerwa nezvinodiwa zvekuwedzera uye zvinoumbwa kuburikidza nekugadzirisa extrusion. Iyo ipaipi yekudonha pombi ine simba rakakwira, kugadzikana kwakanaka, hupenyu hwakareba hwebasa uye kudhura kuita. Inogona kuiswa pakuvaka drainage, tsvina pombi system uye kufefetera pombi system.
Zvakanakira PVC pombi ndeinotevera:
1.Iine yakasimba tensile uye inomanikidza simba uye yakakwira chengetedzo chinhu.
2. Kurwisa kudiki kwemvura:
Rusvingo rwePVC pombi rwakatsetseka chaizvo uye kuramba kwemvura kuri kushoma kwazvo. Yayo roughness coefficient ingori 0,009 chete. Yayo mvura yekuendesa inokwanisa kuwedzerwa ne20% ichienzaniswa neiyo imwechete dhayamita yakakanda simbi pombi uye 40% yakakwira kupfuura iyo kongiri pombi.
3.Kunakisa ngura kuramba uye kemikari kuramba:
Pombi dzePVC dzine yakanakisa acid kuramba, alkali kuramba, ngura kuramba. Izvo hazvina kukanganiswa nehunyoro uye ivhu PH. Hapana anticorrosive kurapwa kunodiwa pakuiswa kwepombi. Iyo pombi ine yakanakisa ngura kuramba kune inorganic acids, alkalis uye munyu. Iyo inokodzera maindasitiri tsvina kubuda uye kutakura.
4. Kunaka kwemvura kwakanaka: Kuisirwa mapaipi ePV kune kuomesa kwakanaka kwemvura zvisinei nekuti kwakasungwa here kana kubatana kweringi yerabha.
5. Anti-bite: PVC pombi haisi sosi yekudya, saka haizokanganiswi nemakonzo. Zvinoenderana nemuyedzo wakaitwa neNational Health Foundation muMichigan, makonzo haatombo kuruma pombi dzePV.
6. Kunaka kwekukwikwidzana: Hupenyu hwebasa hwakajairwa hunogona kusvika kupfuura makumi mashanu.
Icho chikonzero chekuisa PVC pombi haingori chete pamusoro pekuita zvakanakira. Kurema kwayo kurema kunogona kuchengetedza mutengo wekufambisa wemichina inorema uye kudzora zvakanyanya nguva yekuboora mabomba mupombi. Kunyangwe mune kudengenyeka kwenyika kana zvimwe zviitiko, mapaipi ePVC anogona kuvapo asina kusimba. Izvi zvinogadzira PVC pombi yakawanda uye yakawanda vatsigiri.